Chaayinaan maaliif liqii baay'ee biyyoota guddataa jiranif kenniti? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Paula Bronstein
Haga waggaa dhihootti Chaayinaan biyyoota deeggarsi taasifamu keessaa tokko turte. Amma garuu, akkaataa gargaarsaa duraan beekamu ykn liqii maallaqaan biyya kanaan dura gargaarsa kennuun beekamtu, Ameerikaa, dorgomaa jirti.
Qorattoonnii biyya Chaayinaan ala iyyoota garaa garaa irraa walitti dhufan yeroo duraaf kuufama daataa gargaarsa maallaqaa Chaayinaan biyyootaaf taasiftu agarsiisu walitti qabaniiru.
Daataan kuni piroojektoota 5, 000 ol biyyoota 140 keessa argaman kan hammate yoo ta'u Chaayinaa fi Ameerikaan maallaqa hagami biyyoota akka gargaaran baruu dandeessise.
Biraad Paarkis qorataa olaanaa pirojektichaati.
Laaboraatorii qorannoo AidDatan kan kollejjii Wiiliyaamiifi Meerii Varjiiniyaa argamu kan hogganan yoo ta'u qorannicha xumuruuf qorattoota Yunvarsiitii Harvaardii fi Yunvarsiitii Heyidelberg Jarman argamu waliin hojjetan.
Laaboraatoriin qorannoo AidData jedhamu isaan hogganan deebiwwan mootummaan Chaayinaa hin deebisiniif mala qorannoo isaanii fayyadamani argataniiru.
Gabaasaalee miidiyaa gargaarsi Chaayinaan taasifte hordofuun, dokmantiiwwan imbaasiiwwanii akkasumas odeeffannoo gargaarsaa fi liqii Chaayinaa irraa walitti qaban.
Chaayinaan akkamin maallaqa kenniti?
Bu'aa gurguddoo qorannichaa keessaa: Arjoomtonni gurguddoo addunyaa, Chaayinaa fi Ameerikaa, waggoota kuusaan odeeffannoo qabame keessatti maallaqa wal fakkaataa gargaaranis akkaataan itti kennan gargari.
Gargaarsa maallaqaa Ameerikaan kennite keessaa dhibbantaan 93 haaluma biyyoonni Lixaa indastiriin badhaadhani marti itti-fayyadamaniin raawwatame.
Galmi guddaa gargaarsi itti kennamu misooma diinagdee guddisuufi biyyoonni gargaarsa fudhatan akka itti jiraatan gochuufi.
Maallaqa kenname keessa harki tokko arfaffaan arjoomame malee akka liqii kan deebi'u miti.
Faallaa kanaan, gargaarsa Chaayinaan biyyoota kaaniif kennite keessaa dhibbantaa 21 qofaadha akkaataa gargaarsa duriin kan kenname.
Qarshiin hafewoo? Maallaqa maqaa gargaarsaan kenname keessaa hammi caalu maqaa liqii daldalaa jedhuun dhala isaa waliin Beejingiif akka kanfalamu ta'a.
''Chaayinaan maallaqa liqeessiteerra fayyadamuu barbaaddi,'' jechuun Biraad Paarkis ibsu.
Goodayyaa suuraa Hojattoonni Chaayinaa Itoophiyaatti daandii baaburaa Finfinnee fi Jabuutii wayita ijaaraa turan, bara 2015.
Biyyoota kamtu gargaarsa Chaayinaa argataa jira?
A.L.A erga bara 2000 eegale biyyoonni Afrikaa itoophiyaa dabalatee gargaarsaafi liqii mootummaa Chaayinaa hedduu argataniiru.
Haa ta'u malee, qabeenyi Chaayinaa hospitaala Senegaal argamurraa eegale buufatawwan doonii Paakistaaniifi Sirilaankaa argamanitti kan qoqqoodame dha.
AidData'n haga A.L.A bara 2014'tti odeeffanno walitti qabe. Hagasittis Ruusiyaan Paakistaaniifi Naayijeeriyaa dursuun gargaarsa Chaayinaa argataa jirti.
Faallaa kanaan, A.L.A baruma 2014'tti biyyoonni baay'inaan gargaarsa Ameerikaa argatan Iraaqiifi Afgaanistaan yeroo ta'an Paakistaan itti aanti.
Maallaqa hagami biyyootaaf kennuu isa jedhurratti siyaasni gahee olaanaa qaba. Qorannoowwan kanaan duraa qorattoonni AidData taasisan Beejingii fi Waashingitan biyyoota mootummoota gamtoomanitti isaan deggaraniif gargaarsa kennaa turuu isaanii agarsiisa.
Chaayinaaf garuu dhimmi diinagdee gahee olaanaa qaba: qorattoonni AidData akka bira gahanitti Chaayinaan biyyoota liqii liqeessite dhala isaa waliin argachuu barbaadduttii fi al ergii taasiftuufitti xiyyeeffatti.
Goodayyaa suuraa Qorattoonni gargaarsa Chaayinaan harka lafa jalaatiin Koriyaa Kaabaatiif dhagalaasaa jiru argachuuf yaalaa jiru.
Maallaqni Chaayinaa maaliif hammana hawwataa ta'e?
A.L.A waggoottan 1960 hanga 1990'tti biyyoonni Lixaa liqii maallaqaa dhala guddaa qabu biyyoota guddataa jiranif liqeessaa turani.
Haa ta'u malee, yeroo biyyoonni liqeeffatan deebisuu dhaban tarsiimoon suni galma gahuu dhabe.
Mormii kaase jennaanis moodeeliin yookiin akkaataan gargaarsa biyyoota Lixaa akka jijjiiramu ta'e.
''Dhala gabaa keessa jiruun biyyoota guddataa jiranif liqiin kennamu akka hin qabne qajeelfama irra kaa'ame ture,'' jedhu Biraad Paarkis.
Amma immoo Chaayinaan dhufte. Isaan miseensa biyyoota yeroos qajeelfama sana qopheessan waan hin turreef gatii dhalaa gabaa keessa jiruun itti dhiyaatuun liqii kennuuf fedhii guddaa qabu.''
''Biyyoonni yeroo jeequmsa maallaqaa keessa seenaan dhaabbata maallaqa addunyaatti deemuu hin barbaanne gara Chaayinaa deemu.''
Chaayinaan liqeessuu itti fuftii?
Daataan akka agarsiisutti biyyoonni gargaarsa Chaayinaa argatan diinagdeedhaan miidhamaa hin jirani garuummoo diinagdeen isaanii guddataas hin jiru.
Qorattoonni akka jedhanitti waggoota 10-15 dhufanitti liqiin biyyoonni fudhatan gaafa dabalaa deemeefi kanfaluu dadhabani idaan isaa Beejingiif ta'a.
Kanaaf Chaayinaan itti yaaduu qabdi.
Ammumaa Chaayinaan gara liqiitti adeemsa ishii jijjiiraa jiraachuu qorattoonni ibsuu isaanii qorataan Yunvarsiitii Biritiish Kolombiyaa Siyaajun Lii dubbatu.
Beejing karaa dhaabbilee garaagaraa kanneen akka Baankii Invastimantii Infiraastiraakcharii Eeshiyaatin liqii kennu itti fufteetti. Baankiin kuni dhibbaa Ameerikaan harka wayyaa jalaan baankii addunyaa keessatti qabdu dandamachuuf Chaayinadhaan kan dhaabbate dha.
Image copyright AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Chaayinaan misooma Buufata doonii Paakistaan Gwaadaar deegarte
Osoo Chaayinaan biyya maallaqa baay'ee liqeessitu taate maaltu dhalata?
Liqiin amma Chaayinaan liqeessitu adeemsa liqii idila-addunyaa irratti dhiibbaa akka qabu ragaan jira. Kunis, biyyoonni adeemsa durii fayyadamani arjooman ulaagaa gaafatan akka dhiisan gochuu danda'a.
Daataa AidData fayyadamuun ogeessi diinagdee Diyeegoo Hernaandez akka jedhutti Chaayinaan liqaa baay'ee kennuu eegaluun ishii biyyoota kanaan dura arjoomuun beekaman gidduu akka wal morkiin cimu taasiseera.
''Yeroo biyyi Afriikaa tokko Chaayinaan gargaaramtu baankiin addunyaa ulaagaa xiqqeessa,'' jechuun barreessu.
Haguma gargaarsi Chaayinaa dhibbantaa 1'n dabalu baankiin addunyaa ulagaa isa daldalli banaa haa ta'u jedhu dhibbantaa 15'n akka xiqqeessu obbo Hernaandez bira gahaniiru.
Qeeqxonni akka jedhanitti liqiin Chaayinaa ''gara dhabe'' biyyoonni muraasni gargaarsa yeroo fedhan gara Chaayinaa waan dhaqaniif dimookiraasii isaanii fooyyessuu dhiisaniiru.
Siyaawojun Li akka qoratanitti gargaarsi Chaayinaa biyyoota Afrikaaf jijjiireera. Akka isaan jedhanitti biyyoonni guddataa jiran ulaagaawwan biyyoonni Lixaa lafa kaa'an lagachuun liqiif gara Chaayinaa garagaluun isaanii fooyya'insa sirna dimookiraasii isaanii akka hin foyyeessine isaan taasiseera.
''Biyyoonni dur arjoomuu eegalan adeemsa Chaayinaa qeequ,'' jedhan, haa ta'u malee, ''biyyoonni Afrikaa hedduu gargaarsa Beejingiin guddaa fayyadamaa jiru hamma tokkos ta'u filannoo biraa argataniiru.''
''Chaayinaan addunyaa irratti yeroo shoora olaanaa taphattu keessa seentee jirti"